यस्तो छ, ढोरपाटन नगरपालिकामा कोरोना कहरको व्यवस्थापन - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ ८, शनिबार १३:३९
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनमा ढोरपाटन नगरपालिका सबै हिसावले तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । लक्षण सहितका विरामीहरुका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने, संक्रमितको उपचार कक्ष निर्माण, जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वेड तयार देखि प्रायप्त अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको १० वेडको तयार :
बुर्तिबाङ बजारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अक्सिजन सहितको १० वडे आइसोलेसन तयार पारिएको छ । संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जानु, अक्सिजन लेवल कम भएका विरामीहरुको स्वास्थ्यकेन्द्रमा चाप थपिदै गएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. मिलन मल्लले बताउनुभयो । नगरपालिकाको सक्रियतामा उक्त वेड तयार पारिएको बताउँदै डा. मल्लले, ‘कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएका छौं । कतिपयको रिपोर्ट आउन बाँकी भएपनि, अक्सिजन लेवल कम भएका विरामीहरु दैनिक जसो थपिदै गएको मल्लको भनाई छ । यसले अपुग हुने सम्भावना पनि छ, अझै बेड र अक्सिजन थप्दै जानुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।
५ वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटरबाट विरामी उपचार :
कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएका र अक्सिजन लेवल कम भएका विरामीलाई अहिले ५ वटा अक्सिजन कन्सनटे«टरबाट उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा यस्ता ५ जना विरामी अहिले उपचाररत छन् । उनीहरुकमा संक्रमणको लक्षण देखिएको डा. मल्लले बताउनुभयो । भिन्नै व्यवस्था गरेर उपचार गरेका छौं । पिसिआर गरेर धौलागिरी अस्पताल पठाएको तर रिपोर्ट नआइसकेको उहाँको भनाई छ । उपचररत विरामी अवस्था सुधारउन्मुख रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० थान अक्जिनको व्यवस्था :
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हाल ठूलो १५ र सानो ५ थान गरि २० थान अक्सिजन सिलिन्डरको भरिएको अवस्थामा छन् । नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले आफ्नो नीजि खर्चमा खरिद गरेको ६० थान अक्सिजन सिलिन्डर पोखरामा भरिएका अवस्थामा छन् । तत्काल ६० थामन मध्ये स्वास्थ्य केन्द्रमा ३० थान प्रदान गर्ने नगरप्रमुख नेपालीको भनाई छ । योसँगै स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रबन्ध हुनेछ । नगर प्रमुखद्धारा खरिद गरिएका वाँकी ३० थान अक्सिजन सिलिन्डर जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालमा आइतबार हस्तान्तरण गरिने भएको छ । ‘जिल्ला भरबाट कोरोना संक्रमण भएका विरामीको मुख्य उपचार थलो धौलागिरी अस्पताल भएकाले आफूले सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसावले निजीतवरले खरिद गरिएको ३० थान अक्सिजन सिडिन्डर त्यहाँ बुझाउने सोंच बनाएको बताउनुभयो । ३० थान धौलागिरी अस्पताल र ३० थान स्वास्थ्य केन्द्रमा हस्तान्तरण गर्देछु ।’ नगरप्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।
प्रत्येक वडाका स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजन सहितको १/१ वेड तयार हुने :
नगरपालिकाले नगरका नौं वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सहितको एक÷एक वेड तयार गर्ने तयारी गरेको छ । विरामीलाई अपरझट अक्सिजन लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकालागि पूर्व तयारी गर्न र विरामीलाई अक्सिजन सहित स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नगरले यस्तो तयारी गर्न लागेको नगर प्रमुख नेपालीको बताउनुभयो । त्यसका लागि नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ । केही दिनभित्रै नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सहितको ईमेरजेन्सी वेड तयार गर्छौं ।’ नगर प्रमु्ख नेपालीले भन्नुभयो ।
३ जना संक्रमितको उपचार हुँदै :
स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना संक्रमण भई स्वास फेर्न अफ्ठेरो भएका ३ जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ । उनीहरुलाई अक्सिजन दिइएको छ । थप आवश्यक औषधि उपचार भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । पछिल्लो समय नगरपालिकाले १ सय ५३ जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाएको तर अहिलेसम्म रिपोट नआइसकेको डम. मल्लले बताउनुभयो ।
उपचार प्रबन्धमा डाक्टरको नेतृत्वमा ४/४ जनाको दुई ग्रुप :
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा कोरोना महामारीपछि विरामीहरुको चाप बढ्ने संकेत देखिएपछि उपचार प्रबन्धमा दुईवटा टिम बनाएर खटाइएको स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डा. मिलन मल्लले बताउनुभयो ।’ उहाँका अनुसार चार÷चार जनाको दुई ग्रुप बनाएको र १०÷१० दिनमा फरक फरक डिउटी प्रबन्ध गरि व्यवस्थापन मिलाइएको डा. मल्लले जानाकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एउटा टिमको नेतृत्व स्वयं आफै डा. मल्लले गरिरहनुभएको छ । उहाँको टिममा १ जना नर्सिङ, १ जना प्यारामेडिक र १ जना सहयोगी सहितको टिम रहेको जानाकारी दिनुभयो । यस्तै अर्को टिममा डा. निरज सुवदीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनेको छ, त्यो टिममा पनि १ जना नर्सिङ, १ जना प्यारामेडिक र १ जना सहयोगी रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन तथा विशेष भत्ताको प्रबन्ध :
कोरोना कहरमा नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि नगरपालिकाले २० प्रतिशत प्रोत्सान भत्ता तथा कोरोनाका विरामी उपचारमा खटिएकाहरुर्लाइ भिन्नै विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । नगरप्रमुख नेपालीका अनुसार, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा खटिएका नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि २० प्रतिशत र कोभिडका विरामी उपचार, चेकजाँचमा खटिएकालाई अझ विशेष भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय रहेको बताउनुभयो । ‘महामारीको बेला छ, सबै स्वास्थ्यकर्मीले निश्वार्थ भएर आफूपनि जोगिंदै अरुलाई बचाउन पर्ने भयो । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाइराख्न नगरले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ’ नगर प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि मेष सञ्चालन :
ढोरपाटन नगरपालिकाको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा क्रियाशील र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना नास्ताका लागि मेष सञ्चालनको प्रबन्ध गरिएको छ । नगर प्रमुखको आग्रहमा सबै खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने गरि स्वास्थ्य केन्द्रमै मेष सञ्चालनको प्रबन्ध गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रका डा. मल्लले जानाकारी दिनुभयो । ‘कोरोनाको महामारी छ । बाहिर खाना, खाजा खाने अवस्था छैन तसर्थ नगरपालिकको आर्थिक सहयोग हुनेगरि स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि मेष व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको नगरप्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।’
नगरपालिकाको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा :
नगरप्रमुखद्धारा खरिद गरि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परे अन्य सवारी साधन समेत परिचालन गरिने तयारी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले बताउनुभयो । नगरभित्र जहाँ अफ्ठेरो परेपछि स्वास्थ्य सम्बेदनशीलताका विषयमा सबैतिरबाट परिचालित हुनुपर्छ भन्ने मेयर साबको भावना छ । सोही अनुसार व्यवस्थापनमा कुनै कसुर नरहने प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जानाकारी दिनुभयो ।
सबै स्वाथ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता :
कोरोनाकाबीच नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र चेकजाँचका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री तथा आवश्यक औषधि पुगिसकेको नगर स्वास्थ्य संयोजक घनश्याम शर्माले बताउनुभयो । नगरपालिकाले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु र औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका छन् । आवश्यक परेका ठाउँमा माग अनुसार पुर्याउने प्रबन्ध गरिएको संयोजक शर्माले जानाकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा अझै एउटा टिमको आवश्यकता :
बुर्तिबाङमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा बागलुङ पश्चिमका ४ वटा पालिका र अन्य छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत विरामी आउने गर्दछन् । डा. मल्लले जसरी थोरै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने परिपाटि मिलाउनुभएको छ । त्यो टिमले खासगरि कोरोना संक्रमित र लक्षण सहितको विरामीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउनुभयो । अन्य सामान्य विरामी भएका वा नियसिमत चेकजाँचका लागि आउने विरामीहरुले सुरक्षित ढंगले चेकजाँच र उपचारका लागि अभै एउटा टिम भइदिएको भए सजिलो हुने बताउनुभयो । अहिलेको टिम आफै संक्रमितहरुको उपचारमा खटिने भएकाले आफै संक्रमित पनि हुन सक्छ वा अन्य कारणले विरामी पर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको राय छ । यो ढोरपाटन नगरपालिको मात्र दायित्वभित्र नभई अन्य पालिकाहरुले समेत आफ्ना विरामी पठाउने थलो भएकाले अन्य पालिकाले समेत सोच्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । अहिले अन्य पालिकामा आइसोलेशनका नाममा संक्रमित राख्ने प्रबन्ध मात्र गरिएको हो । त्यहाँ उपयुक्त जनशशक्ति अभाव वा विरामीको अवस्था गम्भीर हुन थालेपनि स्वतः यहाँ रिफर हुने हुँदा छिमेकी पालिकाहरुले समेत कोरोना अवधिकालागि स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढोरपाटन नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न जरुरी रहेको डा. मिल्लले सुझाउनुभएको छ । त्यो हुन नसके नगरपालिकाले भिन्ने तरिकाले सौंच बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
स्वास्थ्य केन्द्र होईन प्रदेश मातहतको अस्पताल बनाइनुपर्ने :
बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणपछि अव अस्पताल बनइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस अघि नगरपालिकाले सबै विवरण र प्रक्रिया सहित संघीय सरकारका प्रतिनिधि मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया थाल्न फाईल अघि सारेको छ । ‘हामीले माग भइ आएका सबै विवरण सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डकुमेन्ट पेश गरेका हौं । कार्यान्वयन भएन । नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले भन्नुभयो, यो दुखःद कुरा हो ।’ राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गराइको ढिलासुस्ति हुनु राम्रो नभएको र आफूले झकझकाई रहेको प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई समेत भनेका छौं, यसलाई प्रदेशको मातहतमा रहनेगरि अस्पताल निर्माण गरेर आवश्यक प्रबन्ध हुनुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय पालिका र प्रदेश प्रमुख सहितको जुम मिटिङमा समेत यसलाई अस्पतालमा स्तरउननति गर्ने कुरा एकमतले उठेको छ । अव पहल थाल्छौं ।’ नगर प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।
कोरोनाका बिरामीकाे आँखा बिगार्ने घातक ‘कालो ढुसी’, नेपालमा पनि देखा पर्न थाल्यो, कसरी जोगिने ?